जापानी भाषा परीक्षा भोलिदेखि, कति जनाले दिन पाउने ? – Khabar Silo
जापानी भाषा परीक्षा भोलिदेखि, कति जनाले दिन पाउने ?
काठमाडौं। जापानी भाषा परीक्षा भोलि(आइतबार)देखि सञ्चालन हुने भएको छ। नर्सिङ केयर (केयर गिभर) का लागि पहिलो चरणको भाषा परीक्षा आइतबारदेखि हुन लागेको हो।
जापान फाउनडेसनका अनुसार आवेदन दिएका मध्येबाट परीक्षाका लागि एक हजार जना छानिएका छन्। हजारौंले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका भए पनि हजार जनाले मात्रै परीक्षा दिन पाउनेछन्।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा तुलसी सुवेदीले लेखेका छन्। लक्की ड्रमार्फत परीक्षार्थी छानिएको जापान फाउन्डेसनको दाबी छ। परीक्षामा पास हुने मात्रै नर्सिङ केयरमा छनोट हुन पाउनेछन्।
काठमाडौं पछिल्लो दुई महिनामा अमेरिकी डलरको भाउ पाँच रुपैयाँ २८ पैसा (४.८ प्रतिशत) महँगिएको छ। गएको २० असारमा राष्ट्र बैंकले तोकेको अमेरिकी डलरको विनिमय बिक्रीदर एक सय नौ रुपैयाँ ७८ पैसा थियो। तर २० भदौमा एक सय १५ रुपैयाँ ६ पैसा पुगेको छ। गत बुधबार त डलरको भाउ एक सय १६ रुपैयाँ १५ पैसा पुगेको […]
गत राति आएको भीषण बाढीले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा १८ जना बेपत्ता भएका छन् भने २ शब प्राप्त भएको छ । राति ११ बजेबाट भोटेकोशी र ठाडोखोलामा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुगेको बाह्रबिसे नगरपालिकाका कर्मचारी सुनील थापाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । बिहान ५ बजेबाट हराएकाहरुको खोजी कार्य थालिएको छ । बाढीले खाटचौर भन्ने स्थानमा अरनिको राजमार्गको पक्की […]
प्रदेश सरकारकै लगानीमा हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग
२ कात्तिक, हेटौँडा । बहुचर्चित हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्ग प्रदेश नं ३ सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले हेटौँडा काठमाडौँलाई सुरुङमार्गमार्फत जोड्ने तयारीलाई तीव्र पारेको छ । सुरुङमार्गलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै गौैरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि सारेको भए पनि निजी कम्पनीको केन्द्र सरकारसँगको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेका कारण पहिलो […]